အဓိပ္ပါယ်ရှိသော WhatsApp Emojis နှင့် Emoticons EmojisWiki.com
အဓိပ္ပါယ်ရှိသော WhatsApp အီမိုဂျီများနှင့် အီမိုတီကွန်များ
အီမိုတီကွန်များကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖန်တီးခဲ့ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကို အသုံးပြု၍ လူတို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပုံကို ပြောင်းလဲရာတွင် ကြီးမားသောခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ မူလအစကတည်းက သူတို့ဟာ စိတ်ကူးတွေကို ပိုကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး သင့်ခံစားချက်တွေ ဒါမှမဟုတ် ခံစားချက်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြနိုင်စေခဲ့ပါတယ်။
¿သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကီးဘုတ်တွင် ရာနှင့်ချီသော အီမိုဂျီများကို ရှာတွေ့နိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား။? ၎င်းတို့သည် အပြုံးများ၊ နှလုံးသားများ သို့မဟုတ် ရယ်မောခြင်းကဲ့သို့သော အချို့သောအသုံးအနှုန်းများကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့သော သင်္ကေတများကို သဘာဝအတိုင်း အစားထိုးပါသည်။ ဒါတွေက အဆုံးမရှိတဲ့ အမူအရာတွေပါတဲ့ မျက်နှာလေးတွေပါ။
အထက်ဖော်ပြပါများကြောင့်၊ ဤဆောင်းပါးတွင် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် အီမိုတီကွန်များစာရင်းကို အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်၊ အီမိုဂျီများသည် မည်သည့်အရာ၊ ၎င်းတို့အတွက် အသုံးပြုထားသနည်း၊ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် အခြားအရာများကို သင်သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
WhatsApp နှင့် Facebook အတွက် အမျိုးအစားအလိုက် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော emojis နှင့် အီမိုတီကွန်များစာရင်း
WhatsApp အစားအသောက်နှင့် သောက်စရာ အီမိုဂျီများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အီမိုတီကွန်များ
အဓိပ္ပါယ်ရှိသော WhatsApp သင်္ကေတများ၏ အီမိုဂျီများနှင့် အီမိုတီကွန်များ
အဓိပ္ပါယ်ရှိသော WhatsApp တိရစ္ဆာန် အီမိုဂျီများနှင့် အီမိုတီကွန်များ
WhatsApp လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အားကစား အီမိုဂျီများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အီမိုတီကွန်များ
အဓိပ္ပါယ်ရှိသော WhatsApp Objects ၏ Emojis နှင့် Emoticons
WhatsApp ခရီးသွားခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အီမိုဂျီများနှင့် အီမိုတီကွန်များကို နေရာများ
WhatsApp People Emojis နှင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အီမိုတီကွန်များ
အီမိုကွန်များ သို့မဟုတ် အီမိုဂျီများသည် အဘယ်နည်း။
အီမိုတီကွန်များသည် လူတို့၏စိတ်ခံစားမှုများ၊ ဆန္ဒများ၊ စိတ်ကူးများ သို့မဟုတ် ခံစားချက်များကို အမြင်အာရုံကွဲပြားသောနည်းဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် Instagram၊ WhatsApp သို့မဟုတ် Facebook ကဲ့သို့သော အွန်လိုင်းပလပ်ဖောင်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ဇာတ်ကောင်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
အစမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်သည်ဂျပန် ၎င်း၏အသုံးအနှုန်းမှာ 絵⽂字 ဟူသော စာလုံး “e” နှင့် “moji” ဟူသော စကားလုံးဖြင့် ရေးစပ်ထားသည်။ အချို့သော အကယ်ဒမီများပင်လျှင် အချို့သော ပညာရပ်များကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို အလေးအနက်ထား၍ ဤအရာများ ခေတ်စားလာပါသည်။ တစ်နှစ်တာ၏စကားလုံး 2015 en ။
ဤရုပ်ပုံများကို ကိုယ်စားပြုဖန်တီးခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် Shigetaka Kurita ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့်၊ အချိန်ကာလအသုံးပြုသူများသည် မက်ဆေ့ချ်ခွင့်ပြုထားသည့် စာလုံး 160 တွင် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနေသည့် အခြေအနေအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်။
မူလက အီမိုဂျီတစ်ခုကို အတိုင်းအတာ 12 x 12 အထိ ကန့်သတ်ထားသည်။ pixels ကို အဓိကကတော့ ခေတ်ရဲ့ ဂရပ်ဖစ်နည်းပညာတွေရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ပါ။ ဤရုပ်ပုံများကို ကိုယ်စားပြုခြင်းများသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် မသက်ဆိုင်သောကြောင့် ဂျပန်ရောင်းချသူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံများကို ဖန်တီးရန် အခွင့်အရေးယူခဲ့ကြသည်။
အထက်ပါအချက်များကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် ဤသင်္ကေတများကို ပိုမိုမကြာခဏအသုံးပြုကြပြီး မည်သည့်မက်ဆေ့ချ်ကိုမဆို ရေးသားရာတွင် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
WhatsApp နဲ့ Facebook မှာ ဘာအတွက် အသုံးပြုကြလဲ။
အီမိုဂျီများကို မူလက အချို့သော စိတ်ခံစားမှုများကို ဂရပ်ဖစ်ပုံဖော်ရန်အတွက် စာသားမက်ဆေ့ချ်များတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယနေ့ခေတ် နည်းပညာ ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ၊ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာများမှ အယူအဆများ ပါဝင်သည်။ အမျိုးမျိုးသော လက်တွေ့ဘဝအခြေအနေများကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့် သင်ညွှန်ပြရန်။
Whatsapp၊ Facebook နှင့် Instagram တို့တွင် အလွန်အသုံးဝင်သည်။ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ မျှော်လင့်ချက်၊ အချစ်၊ မာန၊ ငြိမ်သက်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ မာနနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော စိတ်ခံစားမှုများကို ညွှန်ပြရန် သင့်အတွက် ချတ်များအားလုံးတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ပျော်ရွှင်မှု၊ ချစ်မှု၊ သနားမှု၊ အံ့သြမှု၊ ဟာသ၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ ဒေါသစသည့် ခံစားချက်များကို ဖော်ပြရန် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာအနေဖြင့်၊ သင်သည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဝမ်းနည်းမှုများစွာခံစားရကြောင်း ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကီးဘုတ်တွင် ပေါ်လာသည့်မျက်နှာများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အတူ သူတို့သည် သင့်ပျော်ရွှင်မှုအခိုက်အတန့်များကို ညွှန်ပြရန် လွယ်ကူစေသည်။ သို့မဟုတ် သင့်စိတ်ခံစားချက်များ ပြောင်းလဲခြင်း
ဤပုံများသည် လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ အရသာရှိသော ဟင်းစားခြင်းစသည်ဖြင့် ဖော်ပြလိုသော စကားလုံးအရေအတွက်ကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။
Facebook နှင့် WhatsApp တို့တွင် အသုံးအများဆုံး အီမိုဂျီများ သို့မဟုတ် အီမိုတီကွန်များသည် အဘယ်နည်း။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp နှင့် Facebook အဆင့်အတန်းများနှင့် Instagram အတွက် အသုံးအများဆုံး အီမိုဂျီအချို့ကို တင်ပြထားပါသည်။
သင်သည် တစ်စုံတစ်ဦးကို ချစ်မြတ်နိုးသည်ဟု ခံစားရပါက၊ သင်သည် အချစ်ရေး ဖြစ်ချင်သည် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦး၏ အလှတရားကြောင့် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခု၏ အလှကို စွဲလန်းနေပါက၊ သင်သည် အချစ်အီမိုတီကွန်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ မျက်လုံးထဲတွင် နှလုံးသားနှစ်ခုပါသော ပျော်ရွှင်သောမျက်နှာကို ကိုယ်စားပြုသည်။
နောက်ထပ်အသုံးအများဆုံးသင်္ကေတမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အော်ဟစ်ခြင်း အီမိုဂျီဖြစ်သည်။ကြောက်ရွံ့မှု သို့မဟုတ် ထိတ်လန့်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် အံ့အားသင့်သည့် မျက်နှာဖြစ်ပြီး ၎င်းကို စွဲမက်ဖွယ် သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖော်ပြရန်အတွက် ၎င်းကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
မှိတ်တုတ်နေသည့် အီမိုဂျီသည် သင်တစ်စုံတစ်ခု၏ ကြံရာပါဖြစ်ရမည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ဂိမ်းသို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖိတ်ခေါ်ရန် အဆိုးဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ဝမ်းနည်းမှုကို ဖော်ပြချင်ရင် အလွယ်တကူ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ငိုနေတဲ့ မျက်နှာရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် နက်ရှိုင်းသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပြီး အခက်ခဲဆုံးအခိုက်အတန့်တွင် သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။
အခြားသူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးအချို့အပေါ် သဘောတူညီချက်၊ အတည်ပြုချက် သို့မဟုတ် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို ဖော်ပြရန် လက်မထောင်ခြင်းသည် အသုံးဝင်သည်။
အီမိုဂျီ သို့မဟုတ် မယုံကြည်နိုင်သော မျက်နှာကိုလည်း သင်တွေ့နိုင်သည်။ တတိယပါတီများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အယူအဆတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယများကို ထုတ်ဖော်ရန် အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော မျက်ခွံများဖြင့် မယုံကြည်နိုင်သော မျက်နှာဖြင့် ကိုယ်စားပြုထားသည်။
ရယ်မောခြင်း သို့မဟုတ် မျက်ရည်ပါသည့် သင်္ကေတသည် သင့်အား အလွန်အမင်းပျော်ရွှင်မှု၊ ရယ်မောခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုအတွက် ရယ်မောခြင်းကို မရပ်တန့်နိုင်ဟု ညွှန်ပြသောကြောင့် လူကြိုက်များသည်။ ၎င်း၏ ပြုံးနေသော မျက်နှာဖြင့် မျက်လုံးတစ်ဖက်စီတွင် အစက်နှစ်စက်ဖြင့် အလွယ်တကူ ခွဲခြားနိုင်သည်။
နောက်ထပ် ရေပန်းအစားဆုံး ပုံတွေ ကတော့ နှလုံးသား နမ်းတဲ့ မျက်နှာပါ။. အနမ်းပေးလိုက်တဲ့ မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတိုင်းကို စိတ်ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်တစ်ခုပါ။
Flamenco အကသမားသည် ပါတီပွဲသို့သွားလိုသောဆန္ဒကို ဆက်သွယ်ပေးသည့် သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် သင့်အိမ်မှ နာရီအနည်းငယ်ကြာ ထွက်ခွာကာ ကောင်းမွန်သောအချိန်ကို ပိုင်ဆိုင်လိုကြောင်း ညွှန်ပြရန် ၎င်းကို ပြည့်စုံစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
အီမိုတီကွန်များ သို့မဟုတ် အီမိုဂျီများ၏ အဓိပ္ပာယ်အတိအကျကို သိရန် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
တခါတရံတွင် လူတို့သည် သတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်က ၎င်းတို့အား အချိန်အတော်ကြာအောင် မတူညီသောအသုံးပြုမှုကိုပေးသောကြောင့် အီမိုဂျီ၏အဓိပ္ပာယ်ကို မှားယွင်းစွာမျှဝေလေ့ရှိကြသည်။
အမှန်က အီမိုတီကွန်တစ်ခုစီတွင် တရားဝင်အမည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် သင်အသုံးပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်စမှတ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ မဟုတ်ပါက နားလည်မှုလွဲမှားမှုများရှိနိုင်ပြီး ထိုမျက်နှာငယ်လေး၏အဓိပ္ပါယ်ကို နားမလည်သည့်အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ အဆင်မပြေခြင်း သို့မဟုတ် ရှက်စရာပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဥပမာ၊ မျောက်သုံးကောင်ကဲ့သို့သော တရုတ်စကားပုံများကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် ကိုယ်စားပြုပုံအချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အဆိုးကို မမြင်၊ မကောင်းမှု မကြားရ၊ မကောင်းမှု မပြုရန် မဆိုလိုဘဲ၊ သို့သော် လူတို့သည် ဝမ်းနည်းခြင်း၊ စိုက်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်ထားရန် ဤမျက်နှာများကို တစ်ဦးချင်းစီ အသုံးပြုကြသည်။
အဆိုပါသင်္ကေတ ယုန်နားရွက်ရှိသော အမျိုးသမီးများသည် ကာမဂုဏ်နှင့် အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ဒါပေမယ့် လူတွေက ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ဒါမှမဟုတ် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ညွှန်ပြဖို့ ဒီ အီမိုဂျီကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းအုပ်စုများတွင်ရှိပြီး Facebook၊ Instagram သို့မဟုတ် WhatsApp ကဲ့သို့သော လူမှုကွန်ရက်များ ပါဝင်သည်။
အော်ဟစ်ခြင်း၊ အံ့သြခြင်း သို့မဟုတ် ထိတ်လန့်ခြင်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည့်အခါ လူများသည် များသောအားဖြင့် မျက်နှာ၏ အီမိုဂျီကို ပါးပြင်ပေါ်တွင် လက်ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ဤသင်္ကေတသည် နာမည်ကြီး Edvard Munch ၏ လက်ရာနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
တခါတရံ ချောကလက်ရေခဲမုန့်လို ဟန်ဆောင်သည့် မွမ်းမံမှုသင်္ကေတကိုလည်း သင်တွေ့နိုင်သည်။ အမှန်တရားကတော့ အဲဒါပါပဲ။ ၎င်း၏ဖန်တီးမှုသည် ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ယခင်ဥပမာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ လူအများစုသည်၎င်းကိုမိမိတို့ဘာသာပေးသော်လည်း၊ အီမိုတီကွန်တစ်ခုစီတွင်၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ သို့သော် ဆက်သွယ်ရေးပိုမိုချောမွေ့စေပြီး မက်ဆေ့ချ်များကို နားလည်မှုမလွဲစေရန် ၎င်းတို့ကို ထောက်ပြရန် အမြဲအရေးကြီးပါသည်။
© 2022 EmojisWiki.com · မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီးCookies တွေကိုပေါ်လစီ ကိုယ်တို့အကြောင်း?